Ft oche, Wall oche, Open ụba racks, Wall Ugwu mgbodo - Chao YU
Xiangshan Chaoyu Machinery Manufacturing Co., Ltd. emi odude ke Zhejiang Province Xiangshan County Industrial Park. The ụlọ ọrụ e guzobere n'afọ 2005, osisi na-facilitated na elu mmepụta akụrụngwa dị ka CNC ọnwụ igwe, CNC turret presses, CNC pịa brek, akpaka phosphatizing & uzuzu mkpuchi akara na na.
Na-aga n'ihu mmepe, ugbu a, Chaoyu bụ otu n'ime ndị kasị ọkachamara manufactory n'ichepụta Network cabinets, n'ala na mgbidi ugwu racks na enclosures, nakwa dị ka a zuru ezu akara nke Herọd ngwa gụnyere: shelving; USB nhazi; mgbidi brackets na na. Anyị na-eme ihe nile ụdị nke mpempe akwụkwọ metal nhazi iji na omenala mere nile di iche iche nke kabinet.
Mbụ na klas quality ga-ike mbụ na klas ika, nanị kasị mma ngwaọrụ na-eji anyị na ngwaahịa, anyị na-achịkwa àgwà si emebe na n'ichepụta, ka warehousing na mbupu. Certifications tinyere ISO9001-2008, RoHS na-apụghị Iru ule.
Anyị otu na-agba mbọ na-enye elu-edu ngwaahịa na ezi uche price na ahụkebe ahịa ọrụ. Anyị ga-achọ iji ohere a na-anabata gị ileta anyị website. Anyị ji obi anyị na-atụ anya gị ase na imekọ ihe ọnụ!
Ft cabinets CYFL-02-usoro
Ft cabinets CYFL-03-Comics
Ft cabinets CYFL-04-Comics
Home Ụlọ ihe nkiri Ft cabinets CYFL-05-usoro
Ft cabinets CYFL-06-Comics
Wall cabinets CYWL-01 usoro
Wall cabinets CYWL-02-usoro
Wall cabinets CYWL-04-Comics
Chassis cabinets bụ dị iche iche si kabinet nke safes, ịgba akwụkwọ cabinets, dị ka dị ọcha, Chassis cabinets na mgbakwunye ga-edebe dị ka kabinet ga nwere ụfọdụ ọrụ, ma na-enwe ezi ventilashion, ọzọ mbubata ...
Network kabinet, nke a na-eji ikpokọta arịọnụ panel, nkwụnye na, nkwụnye na igbe ahụ, electronic akụrụngwa, na ngwaọrụ na n'ibu akụkụ na mmiri, ka ha wee na nwụnye igbe. Dị ...
1 preparatory mbụ, na-agwa ndị ọrụ na ikpe nke onye ọrụ adịghị emetụta nkịtị ọrụ nke ikpe nke kabinet. Mgbe ahụ dị ka netwọk topology Ọdịdị, ẹdude akụrụngwa, na n ...
Network kabinet ga nwere ezi oru arụmọrụ. Ọdịdị nke ahụ kabinet ga-dabere na eletriki, n'ibu Njirimara na ojiji nke gburugburu ebe obibi, iji hụ na Ọdịdị nke ahụ kabinet ...
Na iri abụọ na Century, ọmụma technology aghọwo mainstream ụdị. Mgbe niile, ọ dịghị ozi na-elekọta mmadụ na mmepe nke ugbu a. N'eziokwu, ọmụma nke mba dị iche iche dị anya n'ebe ...